सुनिल शर्माका दुई कलेज : नोबेलमा सङ्क्रमितको नि:शुल्क उपचार, केएमसीमा दिनकै तीस हजार !
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचारसुनिल शर्माका दुई कलेज : नोबेलमा सङ्क्रमितको नि:शुल्क उपचार, केएमसीमा दिनकै तीस हजार !
विराटनगर / नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुनिल शर्मा दुई वटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छन् । उनले विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँमा केएमसी (काठमाडौँ मेडिकल कलेज) सञ्चालन गर्छन् ।
एक साताअघि नोबेलमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएका शर्माले नेतृत्व गरेको केएमसीले महङ्गो शुल्क तोकेको छ । क्याबिनमा बस्नेका लागि महङ्गो शुल्क तोकेको हो । जनरेल बेडमा भने निःशुल्क उपचार हुने बताइएको छ ।
कलेजले कोभिड पोजेटिभ बिरामीहरुलाई उपचारका लागि क्याबिन शुल्क दैनिक ३० हजारसम्म तोकेको छ । कलेजका वरिष्ठ सहायक प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार क्याबिनमा १० हजारदेखि ३० हजारसम्म शुल्क तोकिएको हो । नर्मल बेडमा उपचार गर्दा भने निःशुल्क हुने बताइएको छ ।
कोभिडका बिरामीलाई सिङ्गल बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै दुईवटा बेड भएको क्याबिनमा राख्दा प्रतिव्यक्ति हरेक दिन १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ ।
कोभिड क्याबिनमा बसेर उपचार गर्नेका लागि प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । कलेजमा सुपर डिलक्स रुम पनि तयार गरिएको छ । जसको प्रतिदिन शुल्क ३० हजार रुपैयाँ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि नोबेल मेडिकल कलेजमा भने गत बिहीबारदेखि उपचार निःशुल्क छ ।